Munguva pfupi yapfuura isu takawana isinganzwisisike kuburitswa pane yedu Mi 10 smartphone iyo parizvino iri kushanda pane MIUI 12 Global vhezheni. Iyo nyaya yaive yakabatana neyekuvharira skrini yekumusoro yeMIUI, uko mushure mega pega kutangazve iyo skrini yekumusoro yakagadziriswa mifananidzo inonyangarika. Muvambi wedu Abhishek akasimudza nyaya yacho pasocial media uye akabvunza Xiaomi kugadzirisa. Isu parizvino takamirira gadziriso yepamutemo kubva kukambani, asi kusvika ipapo pane basa rakaenzana zvakafanana. Verenga pane ino chinyorwa kuti uzive nezve MIUI 12 yekumusoro skrini bug mune zvakadzama uye maitiro ekugadzirisa izvi.
Zvakare, verenga | 10 Yakavanzika MIUI 12 Matipi uye Matipi Ekushandisa pane Yako Xiaomi Smartphone
Gadzirisa Kumba Screen Bug pane MIUI 12
Isu tese tinogadzirisa yedu yekumusoro skrini sekuenderana nezvatinoda uye nekuisa maapponi emafaira iwo iwo iwo maitiro pane yekumba skrini Isu zviri pachena tinoisa iwo maapplication pano atinonyanya kushandisa. Asi ko kana isu tichifanira kuita izvi nguva dzese patinotangidza nhare yedu?
Zvakanaka, izvi zviri kuitika pane yedu MIUI 12 inomhanya Mi 10 chishandiso. Pano pane nyaya uye kuti ungagadzirisa sei!
Paunoronga mapikicha eapps sekusarudzika pane skrini yepamusha yechinhu chero chipi zvacho cheXiaomi chinomhanya MIUI 12, uyezve nechimwe chikonzero chitangise kana kuchiisa kuchacha, zvaunoona zvinotsamwisa. Mushure mekumisikidza kwese kuita, yako yekumusoro skrini cutomization yaenda.
Sezvauri kuona muzvikwiriso zviri pamusoro, paive nemaapplication eemaYouTube, Zemote nevamwe, uye mushure mekutanga patsva, iwo maapp icon ese haabvumirwe kubva kuchiratidziro chekumba. Izvi zvinomira paunotangazve iyo phoen, wobva wadzima kana kuichaja mushure mebhatiri repasi.
Zvakanaka, isu tine, nekuti ikozvino tawana mhinduro yechinguvana mukugadzika. Kana iwe uchirangarira, dhizaini yeapp chinhu chitsva muMIUI, uye ichi chingave chikonzero chiri shure kwenyaya iyi. Nekudaro, kuti ugadzirise izvi, iwe unozofanirwa kushandura iyo yekumusoro skrini yekugadzika. Heano maitiro!
Open Settings pafoni yako Xiaomi uye enda ku Home sikirini zvirongwa.
Pano sarudza Home sikirini fomu sarudzo zhinji uye ichakuratidza mbiri mbiri- Classic uye Nedhirowa reApp.
Sarudza Classic theme kubva pano.
Ndizvo! Zvino, iwe paunotangazve foni mushure mekugadzirisa yako yekumusoro skrini, hauzoone chero chages uye ako ese ma icon achave aripo sekuenderana neyako yaunoda odha.
Sezvatakambotaura, iyi mhinduro yechinguvana yenyaya iyi, sekunge mumwe munhu achiri kuda kushandisa dhizaini yeapp, iye haazokwanisa kuita izvi. Tiri kumirira mhinduro yekusingaperi kubva kukambani uye tichagadzirisa ino chinyorwa kana tangogamuchira chero chinhu.
Tiudze mune zvakataurwa, kana iwewo wakatarisana nenyaya yakafanana pafoni yako Xiaomi. Kune mamwe matipi ehunyanzvi, gara wakatarwa!
Xiaomi Inotangisa MIUI 12 neForiso pane zvakavanzika uye UI Kuvandudzwa